မုံရွာနေ လူငယ်တစ်ဦးတီထွင်ထားသော လူစီးလေယာဉ်ပျံငယ်ကို ရွာကထိန်ပွဲတွင် စမ်းသပ်ပျံသန်းနို?? - Yangon Media Group
မုံရွာနေ လူငယ်တစ်ဦးတီထွင်ထားသော လူစီးလေယာဉ်ပျံငယ်ကို ရွာကထိန်ပွဲတွင် စမ်းသပ်ပျံသန်းနို??
မုံရွာ၊ နိုဝင်ဘာ ၁- စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး မုံရွာမြို့တောင်ဘက် ၁၀ မိုင်ခန့်အကွာ ကျွန်းကြီးကျေး ရွာနေ လူငယ်တစ်ဦး တီထွင်ထား သော လေယာဉ်အား ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်မောင်းနှင်ပျံသန်းခွင့်ရရေး အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းအဆင့်ဆင့်ထံခွင့် ပြုချက်တောင်းခံထားကြောင်း ကျွန်း ကြီးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင် မြင့်ကပြောကြားသည်။
“သူကအခု တန်ဆောင်မုန်း လပြည်နေ့ ရွာကထိန်မှာ စမ်းသပ် မောင်းပြချင်တယ်ပြောတယ်။ ဒီ တိုင်းတော့ မဖြစ်ဘူး။ ကျွန်တော် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆီတင်ပြ ပေးမယ်ဆိုပြီး စာတင်ထားတာ။ အခုထိတော့ ခွင့်ပြုချက်မရသေး ဘူး ” ဟု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတင်မြင့် ကပြောကြားသည်။
အဆိုပါလေယာဉ်သည် ကိုယ်ထည်အလျား ၁၄ ပေ၊ တောင် ပံ အရှည် ၁၇ ပေ၊ အမြင့်ငါးပေ ခွဲရှိပြီး အလူမီနီယံနှင့်သစ်သားတို့ ရောစပ်တည်ဆောက်ထားကာ ဟွန်ဒါအင်ဂျင် ၁၆ ကောင်တပ် ဆင်ထားသည်။
“ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း စီးချင်တယ်။ သူများတွေလည်းစီး နိုင်အောင်လို့ လုပ်ထားတာပါ။ နိုင်ငံ တော်ကခွင့်ပြုရင်တော့ ကောင်း တာပေါ့။ ကျွန်တော်မောင်းချင် တာကတော့ ပြေးလမ်းဖြောင့်တဲ့ မုံရွာလေယာဉ်ကွင်းလိုမျိုးမှာပါ။ နိုင်ငံခြားဇာတ် ကားထဲက မောင်း နည်းတွေ၊ တပ်ဆင်တာတွေလေ့ လာတယ်။ အရင်ကအသေးလေး တွေ လုပ်ဖူးတယ်။ အခုလူမောင်း နိုင်တာလုပ်တာ။ လေယာဉ်တစ်ခါ မှမစီးဖူးဘူး။ မောင်းလည်းမမောင်း ဖူးဘူး။ မောင်းတဲ့ပညာလည်းမ သင်ဖူးဘူး။ အိမ်ထဲမှာလုပ်နေရင်း ပြီးစီးလို့အပြင်မှာ ထုတ်ထားတာ ကနေ လူတွေသိပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ပေါ်တင်ရာကနေ လာကြည့်ကြ တာ။ လေကန်အားကို ကိုယ့်ဘာ သာ စမ်းသပ်ထားတယ်။ ပေ ၂၀၀ အမြင့်ထိပျံတက်နိုင်မယ်ထင်တယ်။မပျံနိုင်ဘဲ ကိုယ့်အသက်နဲ့ရင်းပြီး တော့ ဘယ်သူမှမမောင်းပါဘူး” ဟုလေယာဉ်ပျံတည်ဆောက်နေသူ ကိုကျော်ဇင်ဝင်းကပြောကြားသည်။
လေယာဉ်တီထွင်သူလူငယ် သည် ပရိဘောဂလုပ်ငန်းဖြင့် အ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူဖြစ် ပြီး အတန်းပညာစတုတ္ထတန်းအ ဆင့်ရှိသူဖြစ်သည်။ ၎င်းင်းလေယာဉ် ကို တည်ဆောက်နေသည်မှာ လွန်ခဲ့သော ရှစ်လခန့်ကတည်းက ဖြစ်ပြီး ၎င်းင်း၏အလုပ်မှရသော ငွေများ၊ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးများဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်နေခြင်းဖြစ် သည်။
“ကျွန်တော်ကတော့ ခွင့်ပြုမ ထားဘူး။ ခရိုင်စီ/ခန့်ကိုတော့ တင် ထားတယ်။ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ မောင်းတာမလုပ်နဲ့ပြောထားတယ်။ ပုံစံကတော့ လေယာဉ်ပုံစံပေါက် တယ်။ နည်းပညာအရတော့ မ လွယ်သေးပါဘူး ” ဟု မုံရွာမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကြည်နိုင်က ပြောသည်။
အဆိုပါလေယာဉ်ကို အနီး အနားရှိကျေးရွာများနှင့် မုံရွာမြို့ ပေါ်မှ ပြည်သူများသွားရောက် ကြည့်ရှုနေကြပြီး နေ့စဉ်လူ ၂၀၀ ခန့်လာရောက်ကြည့်ကြကြောင်း ရွာခံများက ပြောသည်။
ဒရုန်းလေယာဉ်များတီထွင် ပျံသန်းခဲ့သူ ရူပဗေဒမေဂျာလက် ထောက်ကထိက ဆရာဒေါက်တာ ၀င်းခိုင်က”လေယာဉ်ပျံတာက တော့ ဒီတိုင်းကြီးတက်လို့မရဘူး။ ကိုယ်ထည်တောင်ပံအလေးချိန်နဲ့ တွက်ချက်ထားတဲ့ သူ့အချက်အ လက်အတိုင်းအတာတွေက ပြည့် စုံရင်ပျံနိုင်မယ်။ ဒါပေမဲ့ လေယာဉ် အတက်အဆင်း ထိန်းချုပ်တာကျ တော်တော်ကိုအတွေ့အကြုံရှိမှ ရ မယ်။ ကောင်းတာကတော့ လူ ကိုယ်တိုင်တက်မောင်းပြီး မစွန့်စား သင့်ဘူး။ လူအလေးချိန်အတိုင်း တင်ပြီး ကွန်ထရိုးစနစ်နဲ့စမ်းသင့် တယ်။ ခုလိုစမ်းတာကတော့ ကောင်းပါတယ်။ စမ်းသပ်ခိုင်းသင့် တယ်။ လေယာဉ်ပျံသန်းမှုနည်း ပညာတွေကရှိပြီးသားပါ။ ခုမှစတဲ့ နည်းပညာလည်းမဟုတ်ဘူး ” ဟု မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာများအသင်း၏ ပထမဆုံးအကြိမ် ကထိန်သင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်း ပွဲ
ပြင်ဦးလွင်မြို့ပေါ်တွင် ဆိုင်ကယ်ပျောက်ဆုံးမှုများကို သတင်းစုံစမ်းစဉ် မသင်္ကာသူအား စစ်မေးရာ?
ပရီးမီးယားလိဂ် ရွှေလက်အိတ်ဆုကို ဒီဂီယာ ပထမဆုံးအကြိမ် ဆွတ်ခူး၊ ရက်ဖို့ဒ်နှင့် မာရှယ်တို့ကို